kha yay on Flipboard
15 Added |4Magazines |2Followers | @khayay18h4 | Keep up with kha yay on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “kha yay”
ဂျင်းမှ ရရှိသော အကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ခု ************************************** (၁) သားအိမ်ကင်ဆာ အတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း။ (၂) အူမကြီးကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (၃) နာဖျားရောဂါများ အတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း (၄) အအေးမိ တုပ်ကွေးရောဂါများအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း။ (၅) ရောင်ရမ်းမူများ အတွက်လည်း ကောင်းမွန်ခြင်း။ (၆) နှလုံးရောဂါအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း။ (၇) ဆီးချိုရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ (၈) ခေါင်းတစ်ခြမ်း ကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်ခြင်း။ (၉) ဓမ္မတာကြောင့် ကိုက်ခဲသည့်ဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ခြင်း။ (၁၀) နာစေး ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း။ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပ သတင်းများ Credit: သက်ရှည်ကျန်းမာ
ရန်ကုန်မှာ ထမင်းဆိုင်ထိုင်တဲ့အခါ ကြက်အသည်းအမြစ် မှာစားသူ အများအပြားရှိတာ တွေ့ရမှာပါ။ အသည်းအမြစ်က ကြက်သားဟင်းထက်တောင် ဈေးပိုနေပါလိမ့်မယ်။ အဲသလို ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာလူကြိုက်များတဲ့ အသည်းအမြစ်ကို အင်ထုပြီးရောင်းနေတာတွေရှိတယ်လို့ အသည်းအထူးကု ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောဆိုကြောင်း ဒီတပတ်ထုတ် လျှပ်တစ်ပြက်ဂျာနယ် စာမျက်နှာ ၅ မှာ ရေးထားပါတယ်။ "ကြွက်အကြီးကြီးတွေ အပုံလိုက်ကြီး၊ ရာနဲ့ချီပြီးပုံတယ်၊ ဘယ်လိုဖမ်းထားလဲတော့ မသိဘူး။ အဲဒီထဲက အသည်းတွေကိုထုတ်၊ အသည်းတွေကလည်း အကြီးကြီးတွေ၊ ကြက်အသည်းတွေလောက် ရှိတယ်။ အဲဒါတွေကို မြို့ထဲက စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သွင်းတာ တဲ့။ ဖြစ်ရပ်မှန်ပဲ။ လေးထောင့်ကန်မှာ မနက် (၅)နာရီလောက် သွားရင် ဒိုင်တွေ ရှိတယ်။ ကြွက်အကြီးကြီးတွေ၊ အသည်းတွေလည်း အစုံရှိတယ်။ အဲတော့ ကိုယ်စားတာ ကြက်အသည်းလား ကြွက်အသည်းလား ခွဲခြားကြပါ" လို့ ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောဆိုကြောင်း ဂျာနယ်မှာ ရေးပါတယ်။ ကြွက်များရဲ့ အသားကို ဘာလုပ်ပစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောဆိုထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ အဲဒီဖြစ်ရပ်က တကယ်ပဲလား။ အင်း... လေးထောင့်ကန်ရပ်မှာ မနက်စောစော သွားကြည့်ရင် သိမယ် ထင်ပါရဲ့။ အဲ.... လေးထောင့်ကန် ဆိုတာ ရန်ကုန်မှာ ၂ ခု ရှိတယ် တဲ့။ သင်္ဃန်းကျွန်းမှာလည်းရှိ၊ ရွာသာကြီးဘက်မှာလည်း ရှိတယ် ဆိုပဲ။ ရွာသာကြီးဘက်မှာ လယ်ကွင်းတွေလည်း ရှိတယ် တဲ့။ ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်းပြောတယ်ဆိုတဲ့ ကြွက်တွေက လယ်ကွင်းထဲက ကြွက်တွေလား၊ လမ်းကြိုလမ်းကြား အိမ်ကြိုအိမ်ကြားက ကြွက်တွေလား??? ဒါလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားကြည့်မှ အဖြေသိရမှာပါ။ လယ်ကွင်းထဲကကြွက်တွေ ဆိုရင်တော့ ... အင်း .... ဟင်းအဖြစ် ကင်စား ကြော်စားနေကြတာပဲမဟုတ်လား။ အဲဒီကြွက်များရဲ့ အသည်းအမြစ်ကလည်း ဟင်းဖြစ်ဝါးဖြစ် ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ရန်ကုန်လမ်းကြိုလမ်းကြား အိမ်ကြိုအိမ်ကြားက ကြွက်တွေဆိုရင်တော့ ... သေချာတာက အမှိုက်တွေကြားထဲနေတဲ့ကြွက်များပါပဲ။ သူတို့ရဲ့အသည်းအမြစ်၊ အသား ဆိုတာက စားဖို့ သင့်တော်မယ် မထင်ပါ။ ကြွက်နဲ့ကြက် လိမ်ရောင်းတာမျိုးက ကျင့်ဝတ်၊ ဥပဒေ ချိုးဖောက်ခြင်းပါ။ မြို့ကြွက် ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအရ မသင့်တော်တဲ့အတွက် အရေးတကြီး ရှင်းရမယ့် ပြဿနာပါ။ ဒီတော့ ... ရန်ကုန်စားသောက်ဆိုင်ဈေးကွက်ထဲရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အသည်းအမြစ်ကုန်ကြမ်းက မည်သို့သောကြွက်အမျိုးအစားဆီကလာသလဲ ဆိုတာကို စာဖတ်သူများ သိသင့်ပါတယ်။ ကဲ... သတင်းသမားအပေါင်းတို့၊ အထူးသဖြင့် လေးထောင့်ကန်များအနီး နေထိုင်ကြကုန်သော သတင်းထောက်အပေါင်း၊ CJ အပေါင်းတို့... ရန်ကုန်မြို့စားသုံးသူများအရေးအတွက် စုံစမ်းထောက်လှမ်းဖော်ထုတ်ဖို့တာဝန်ဟာ သင်တို့၏ပုခုံးထက်သို့ ကျရောက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း။ The Irrawaddy
Incest is not illegal in Spain and the 36-year-old father and his 18-year-old daughter say they are being victimised for their unusual relationship<p>A father-and-daughter couple are battling with Spanish social services to regain the custody ofababy they had asaresult of their incestuous …
Model: Khin Injinn Kyaw
မိုးညှင်းတွင် လေယာဉ်ဖြင့် ပစ်ခံရပြီး တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဟု ကေအိုင်အေပြော
.<p>ချင်းမိုင်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ။ ။ ကချင်ပြည်နယ် မိုးညှင်းမြို့နယ်အတွင် အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)၏ တပ်မ ၈ နယ်မြေအတွင်း နိုဝင်ဘာလ ၁၄ …
myanmar internet love song
မြန်မာ အင်တာနက် ဟာသ (Funny Myanmar Internet Cafe')